XOG: Puntland oo fashilisay Qorshe uu Ciidamo Beeshiisa ah ku Qortay Taliyaha Booliska - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
SomaliPuntlandTooshka GJXog cusub
Taliye Xijaar ayaa ciidamadan ka qortay beesha uu kasoo jeedo, waxaana uu doonayey in loo tababarro ciidamada Booliska
Wararka laga helayo Puntland ayaa sheegaya in la fashiliyey qorshe uu watay Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya Jen. Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), kuna doonayey inuu ciidamo kasoo jeeda beeshiisa u qoro Booliska Soomaaliya.
Arrintan oo laga soo xigtay saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in Ciidamadan oo u badnaa dhalinyaro laga soo ururiyey magaalada Buuhoodle iyo Laas-caanood, ay abaabulkooda iyo qoritaankooda lahayd xarun laga sameeyay Buuhoodle.
Askarta la qoray ayaa wararku sheegayaan inay tiradoodu gaartay in ka badan 100 ujeedku ahaa in loo talabarro ciidamada Booliska, kadibna waxaa loo qaaday xarunta Carmo ee Kulliyadda Ciidamada Booliska.
Dhalinyaraddan ayaa qaarkood lagu xiray magaalooyinka Garowe iyo Laascaanood, markii laga shakiyey socdalakooda. Waxa kaloo la sheegay in ku dhowaad 30 ka mida dhalinyaradaas ay gaareen Kulliyadda Carmo, laakiin waxaa dib u celiyey saraakiisha Puntland.
Puntland ayaa hore uga carootay dhalinyaro ay Dowladda Soomaaliya ka ciidan ahaan uga qoratay degaanadeeda iyadoo aan waxba kala socon, waxana boqolaal ka mida ay ku biireen ciidamada Gorgor ee milateriga iyo Haramcad ee Booliska.
Arrintan ayaa dhalisay shaki ku saabsan sabata dhalinyarro kasoo jeeda hal beel looga qorayo ciidamada iyo ujeedka Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Previous articleWaa kuma Aabaha dhalay wiilka loo heysto dilka xildhibanka Ingiriiska? (Warbaahinta Dunida oo raadineysa)
Next articleWararkii ugu dambeeyay Magaalada Guriceel: Ciidamo kusii dhowaanaya iyo Dadkii oo ka qaxay